Libanona: Ohatrinona Ny Pasipaoro Iray? Adihevitra Mangidy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2013 23:53 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Dansk, English
Pasipaoro Libaney iray.. iray amin'ny pasipaoro folo ratsy tazonina indrindra. Saripika: Bilaogera Ali Sleeq
Tsy dia mahataitra loatra ny mahita ny pasipaoro Libaney tafiditra ao anatin'ny 10 ratsy indrindra manerantany eo amin'ny sehatry ny fahafahana mivezivezy sy ny fanakatsakanana. Nasongadin'ny fampilaharana ny fanakatsakanana Visa navoakan'ny Henley & Partners tamin'ny herinandro, ny toerana (laharana) matroka ao amin'ny Tanin'ny Sedera izany ary nitraka valinteny mangidy avy amin'ny mpandray anjara rehetra. Farafaharatsiny tsy diso anjara tamin'izany esoeso izany ny bilaogera @AbirGhattas raha jerena ny lazan'i Libanona eo amin'ny olan'ny fanavakavaham-bolonkoditra:
Ho sahirana be izao i “madame” mandre fa miray lisitra amin'ireo “vonjeo” avy any Nepal, Sodàna, Pakistan ary Sri Lanka.
Mazava ho azy fa tsy mijanona hatreo ny vazivazy rehefa namoaka fanambarana an-gazety ny Fiarovana Ankapoben'i Libanona milaza “ny pasipaoro Libaney no tsara indrindra manerana izao tontolo izao.” Nampian'ny fanambaràna ofisialy moa fa hampiditra ny pasipaoro biometrika “lasa aloha” ry zareo.
Tsy nahasondriana ny olona izany:
Revolution 961 mikajy fa anisan'ny lafovidy indrindra ny pasipaoro vao mahazo azy:
Raha 5.296.760 Km2 monja ny velarantany azon'izay mitazona pasipaoro libaney tsy mila visa, tsy maintsy mandoa 40$ (70$ raha tiana ho azo amin'io andro io ihany) ny olom-pirenena Libaney iray raha te-hahazo ilay pasipaoro manga miasa mandritra ny herintaona. Etsy ankilny ny pasipaoro Danoà na Japoney, ohatra, mamela azy ireo hitsidika mihoatra ny 73.000.000 Km2, izay mihoatra ny 15 avo heny raha oharina amin'ny pasipaorontsika. Saingy ny Danoà mandoa 10,4$ isan-taona (104$ ho an'ny pasipaoro iray manankery 10 taona), ary ny an'ny Japoney mandoa 13,5$ (135$ ao anatin'ny folo taona) .
Tsy dia misy inona antenaina ihany koa ny fomba fijery eo amin'ny resaka biometrika, ny bilaogera Gino niantso azy ity araka izay hitany:
Tahaka izany ihany koa ny momba ny “tahirin-kevitra biometrika vaovao”, zavatra iray ihany no dikany: VOLA BEBE KOKOA! =D efa mandoa anjatony dolara izahay raha hanavao ilay pasipaorontsika izay mora simba hampiasaina anatin'ny taona vitsy ( inoako ho ny lafo indrindra) Ampiana ny “puce” RFID sy ny famotopotorana biometrika dia midika zavatra tokana: olona akaikin'ny ao amin'ny Fiarovana Ankapobeny na iray amin'ireo mpanao politika na mpitari-tafika indray no hahazo manokana ny tsena, dia hampandoa volabe anay, ary hahazo volabe an-tapitrisany amin'ny pasipaoro izay sady tsy misy ilana azy no handiso fanantenana.
Mandritra izany fotoana izany i @eliefares avy ao amin'ny Firenena Misaraka An-Tsaina mitaraina raha mahita ny fanehoa-kevitra ahitana fitsipahana ka hatramin'ny fahatezerana, kely dia kely ny zava-bita mba tena hanatsarana tokoa ny toe-draharaha :
Tsy any amin'ny endriny, na habeny na ny fahatsapanao rehefa mitazona azy ianao na ny fiasany tsara rehefa tarafina any amin'ny fanaraha-maso an-tsisintany no ahitana ny fahamendrehan'ilay pasipaoro. Fa aza miteny amin'ny vahoaka ihany koa hoe mahay mikirakira tahirin-kevitra eo am-pelantanantsika isika no mahatonga antsika ho tsara torimaso rehefa amin'ny alina. Andao antsointsika hoe fomba fiaina izany. Andao antsointsika hoe fanohizana hatrany ny efa mitoetra tsara izany. Tian'ny Libaney tokoa ve ny hanatsarana ny pasipaorony? Raha jerena amin'ny endriny, tsy nahakojakoka azy akory aza ny maro.
Fa inona tokoa moa no ao anatin'ny pasipaoro? Ao amin'ny tontolo izay toy ny efa levona tsy misy dikany intsony aza ny sisintanim-pirenena any amin'ny firenena sasantsasany, nefa ny an'ny hafa toy ny voahidy tsy afa-mifidra izy ireo, mety hidika zavatra be dia be ny pasipaoro. Mety miha-mitombo isa ireo mahatsapa ny tenany ho olom-pirenen'ny tany, saingy mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny famaritana ny fanararaotra ara-piarahamonina sy ara-toekarena avelany hotakarin'ny olony ny firenena niaviany. Ao amin'ny firenena anjakan'ny gidragidra, tsiriritina fatratra ny fizakàna zom-pirenena roa.
Izany ny antony toa hafahafa ny tweet-n'i @Khaladk, saingy izany no fiteny re matetika ao Beirota:
Taorian'ny nahazoan'ny vadiko pasipaoron'i Aostralia dia nandeha nandoro ny pasipaorony Libaney tao amin'ny konsilà izahay! mba miteny